Ny boaty fivarotana Samsung Galaxy A90 5G dia tafaporitsaka | Androidsis
Samsung dia mamely ny elanelana afovoany miaraka amin'ireo findainy avy ao amin'ny Galaxy A andiany avy amin'ny katalaoginao. Ny orinasa Koreana Tatsimo dia nanomboka nilentika tamin'ny fifaninanana tamin'ity taona ity tamin'ny hery matanjaka kokoa noho ny teo aloha, ary tsy andrasana amin'ny taona ho avy.
El Galaxy A90 5G Izy io no ho vavahady voalohany an'ity fianakaviana ity, na dia hofoanany aza ny stigma an'ireo maodely namany hafa, satria ho fantatra ho toy ny terminal avo lenta izy io satria ny mampiavaka azy sy ny mombamomba azy dia anisan'ireo malaza indrindra ananany, ary manamafy izany izahay izao. noho ny a famoahana vaovao niseho tamin'ny tambajotra.
Araka ny lazain'ny boaty fivarotana Galaxy A90 5G, ity fitaovana ity dia hanana fisehoana Infinity-U misy bezel mainty vitsivitsy manodidina azy. Ny endriny dia toa vita amin'ny aliminioma ary misy tsipika antena hita eo an-tampony. Ny volume rocker sy ny bokotra herinaratra dia eo ankavia.
Boaty fivarotana Samsung Galaxy A90 5G
Any aoriana, ny Galaxy A90 5G dia misy fakan-tsary telo miverina miorina amin'ny zoro ankavia. Ireo sensor telo dia mizara trano mitovy, ary eo ambanin'ireo sensor dia taratra LED. Ny A90 5G dia tsy manana scanner an'ny dian-tànana ao aoriana, noho izany dia azonay antoka fa misy iray ao ambanin'io fampisehoana Super AMOLED io, na dia tsy azontsika fantarina aza hoe karazana ultrasonic izany. Ny telefaona dia aseho fotsy, saingy tokony hisy karazana loko hafa amin'ny fanombohana.
Ny ao ambadiky ny boaty dia manambara ny sasany amin'ny antsipirian'ny finday. Ny Galaxy A90 5G dia hanana processeur valo-core, na dia tsy iza aza, fa antenaina ho ilay Snapdragon 855 avy amin'ny Qualcomm. Ny valiny ary ny valin'ny benchmark dia nanambara fa ny processeur ao anaty telefaona dia tsy iza fa ny Snapdragon 855. Ny SoC dia miaraka amina RAM 6GB sy fitehirizana 128GB.
Ny Galaxy A90 miaraka amin'ny 5G dia efa voamarina
Ny fanamboarana fakan-tsarimihetsika triple aoriana dia voatanisa ao anaty boaty ihany koa. Ny sensor voalohany dia fakan-tsary 48 MP ary ampiarahina amin'ny sensor 5 MP sy 8 MP faharoa. Ny Galaxy A90 5G koa dia misy fakan-tsary eo anoloana 32 MP ary manohana famandrihana haingana dia haingana 25 W..
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ireo no fiasa voasivana sy mombamomba ny Samsung Galaxy A90 5G amin'ny alàlan'ny boaty fivarotana azy